Tag: fanamarihana | Martech Zone
Tag: fanoratana indray
Terminology Marketing amin'ny Internet: Ny famaritana fototra
Talata, Desambra 15, 2020 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Douglas Karr
Indraindray isika dia manadino ny halalin'ny fiainantsika ary manadino ny manome fampidirana amina olona fotsiny ireo terminolojika fototra na fanafohezan-teny izay mipetrapetraka eo am-piresahana momba ny varotra an-tserasera. Tsara vintana ho anao, Wrike dia nametraka ity sary an-tserasera Online Marketing 101 ity izay mandalo anao amin'ny teny terminolojia rehetra momba ny varotra izay ilainao hiresahana amin'ny matihanina amin'ny varotrao. Marketing Affiliate - mahita mpiara-miasa ivelany hamidy ny anao
Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fivarotana indray!
Sabotsy, Desambra 14, 2019 Sabotsy, Desambra 14, 2019 Douglas Karr
Fantatrao ve fa ny mpitsidika 2% ihany no mivarotra rehefa mitsidika fivarotana an-tserasera voalohany? Raha ny marina, ny mpanjifa 92% dia tsy mieritreritra ny hividy akory rehefa mitsidika fivarotana an-tserasera voalohany. Ary ny ampahatelon'ny mpanjifa mikasa ny hividy dia mamela ny sarety fiantsenana. Jereo indray ny fihetsikao mividy an-tserasera ary ho hitanao matetika fa mijery sy mijery vokatra an-tserasera ianao, fa
Vokatra mavitrika: Teknolojia Manokana Omnichannel ampiasana AI
Talata, Jona 5, 2018 Alahady, Jona 10, 2018 Douglas Karr
Ny motera fiankinan-doha mandroso an'ny Dynamic Yield dia manangana segondra ho an'ny mpanjifa azo ampiharina amin'ny fotoana tena izy, ahafahan'ny mpivarotra mampitombo ny vola miditra amin'ny alàlan'ny personalization, ny tolo-kevitra, ny fanatsarana mandeha ho azy ary ny hafatra 1: 1. Ireo orinasa miavaka amin'ny personalization dia mahita ny fitomboan'ny fifandraisan'ny mpanjifa, ny fidiram-bola ambony indrindra ary ny ROI avo kokoa. Saingy tsy tongatonga ho azy ny orinasan-centric-n'ny personalization. Mila fividianana mpividy, fifantina mpivarotra, fanaovana onboard ary fampiharana tsara. Ny orinasa sasany dia mieritreritra manokana ny momba azy manokana. Ny sasany dia mampiasa personalization mailaka tsotra. Ny sasany maniry
Karazana fampielezana mailaka 10 voahitsaka tokony hampiharinao
Miara-miasa amin'ireo mpivarotra mailaka marobe aho, gaga foana aho noho ny tsy fisian'ny fampielezan-kevitra mailaka namboarina mialoha sy namboarina tao anatin'ny kaonty taorian'ny fampiharana. Raha sehatra mamaky an'ity ianao - dia tokony ho vonona handeha ao amin'ny rafitry ny rafitrao ireo fanentanana ireo. Raha mpivarotra mailaka ianao, dia tokony hiasa hampiditra karazana mailaka maro karazana izay azonao atao mba hampitomboana ny firotsahana, ny fahazoana, ny fitazonana ary ny fampiakarana avo lenta. Ireo mpivarotra izay tsy mampiasa mailaka nateraka
Fironana ecommerce 10 ho hitanao hampiharina amin'ny 2017
Alarobia, Febroary 1, 2017 Alakamisy Febroary 2, 2017 Douglas Karr
Tsy ela akory izay dia tsy dia nahazo aina loatra ny mpanjifa niditra tamin'ny data-n'ny carte de crédit hividianana fividianana. Tsy natoky ny tranokala izy ireo, tsy natoky ny fivarotana, tsy natoky ny fandefasana… tsy natoky na inona na inona fotsiny izy ireo. Taona maro taty aoriana, na izany aza, ary ny mpanjifa antonony dia mihoatra ny antsasaky ny fividianany amin'ny Internet! Miaraka amin'ny hetsika fividianana, fifantenana sehatra ecommerce tsy mampino, famatsiana tranonkala fizarana tsy misy farany, ary